Dr. Patrick Young, Onye edemede na Steroid Raws
Onye edemede "wangtao"
Dr. Patrick Young dere na gallery .
1. Isi Synephrine HCL Taa, ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị bi na-achọ nhọrọ iji nọgide na-enwe ezigbo ahụike. Ọ dị mma, n'etiti ha niile, iji Synephrine HCL ntụ ntụ bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma ị nwere ike isi gbochie abụba na-adịghị mma. Synephrine ntụ ntụ bụ ngwakọta kemịkal alkaloid nke a na-adịghị ahụkebe. […]
1. Gịnị bụ Pyridoxal Hydrochloride? Pyridoxal Hydrochloride ma ọ bụ vitamin B6 bụ vitamin a na-agbanye mmiri na-ahụkarị n'ihe oriri. A na-ejikarị ya dị ka nri nri. Mgbe ejiri ya dị ka mgbakwunye, Pyridoxal Hydrochloride nwere ike ịgwọ ma ọ bụ gbochie ọtụtụ nsogbu ahụike. A na - ewere ya na ntụtụ, ọnụ ma ọ bụ mgbakwunye nri. Y’oburu n’ibu ozuzu ihe a, [vitamin]
Ekwenyere na mmekorita nwoke na nwanyi bu ihe zuru oke n’etiti ndi nwoke, na ndi nwere chi agha; enwere otutu nhọrọ ọgwụgwọ ịhọrọ site na ha niile site na ọgwụ Viagra, Cialis, na ọgwụ ED. Ha nwekwara ọgwụgwọ homonụ iji nyere aka weghachite mmekọahụ ha. Feelmụ nwanyị nwere mmetụta dị iche iche na nke a. Ọ dabara nke ọma, ha nwekwara nhọrọ. […]
Gịnị bụ Oxandrolone (Anavar)? Oxandrolone (53-39-4), ya na ntụ ntụ Anavar dị ka aha njirimara ya, bụ ọgwụ sịlịktọ na anabolic steroid (AAS) nke bụ ihe ama ama maka ike ya na ike. Ọ bụ n'etiti steroid anabolic a na-ahụkarị na nke a na-ejikarị. Anabolic pụtara na ọ na - akwalite protein ndị dị na cell, si otú a na - eduga […]
1.What bu SR9009? SR9009 ma ọ bụ stenabolic bụ mgbakwunye CAS 1379686-29-9 na-agbaso mmetụta nke mmega ahụ cardio. Ọbụghị naanị ọgwụ ga - enyere gị aka belata ụfọdụ abụba gị, mana ọ ga - eme ka ume gị ka ọ na - eme ka ntachi obi sikwuo ike. SR9009 bụ kọlụm na-agbanwe agbanwe, nke malitere site na […]
Estriol ntụ ntụ
Phaseolin ntụ ntụ
BMS-564929 ntụ ntụ